U-Elaine ulandela ezinyathelweni zikaBrenda | Scrolla Izindaba
U-Elaine ulandela ezinyathelweni zikaBrenda
U-Elaine ulandela ezinyathelweni zikaBrenda Fassie, ethengisa izinkulungwane zamayunithi engoma eyodwa nje futhi waba ngomunye wabaculi besifazane abayincosana baseNingizimu Afrika abenza lokho.
Lo mfana ntombazanyana eneminyaka engama-21 ubudala imemezele izindaba ku-Instagram ukuthi ingoma yakhe evela ku-‘Elements ‘EP enesihloko esithi ‘You Are The One’ ishaye izingcwecwe ze-platinum eziyisikhombisa ngamayunithi angaphezu kwangama-210 ezinkulungwane athengisiwe.
Akumangazi njengoba i-EP iyonke, enezingoma eziyisikhombisa, ibisivele yenza u-Elaine umculi wesifazane osakazwa kakhulu kukho kokubili i-Spotify ne-Apple maphakathi kowezi-2020.
U-Elaine, ogama lakhe liphelele nguNdivhuwo Elaine Mukheli, kubikwa ukuthi wenza i-Elements eyaqinisekiswa ngePlatinum ngoNcwaba kowezi-2020 ngenkathi enza izifundo zakhe zobumeli e-University of Witwatersrand ngowezi-2019.
Ngokushesha ngemuva kwalokho wasayinwa yi-America’s Columbia Records ngaphansi kukaSony ngemuva kokuqokwa kuma-SA Music Awards ngoNcwaba kowezi-2020 kwi-Best R&B Album.
Lesi sihlabani esivela ePitoli senze umsebenzi omangalisayo ngokuqopha amashadi ngesikhathi sisazimele. Akwaziwa ukuthi uzokwenzani kulo nyaka njengoba ene-Columbia Records emesekile kanye nama-platinum angu-7 ukuqalisa u-2021.